ကျန်းမာရေး Archives - khitalinmedia
ဓမ္မတာသွေးအရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆင်းတဲ့အရောင်ကတဆင့် သိနိုင်မယ့် သားအိမ်ကျန်းမာရေး
April 4, 2020 Khitalin Media 0
အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လစဉ်ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ဓမ္မတာမလာမီမှာ အဖြူဆင်းတာတွေက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဓမ္မတာလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖြူဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်အဆင်းကိုကြည့်ပြီး သားအိမ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သတိထားနိုင်ပါတယ်၊ ဒီတော့မှ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ကြိုကြိုတင်တင် လုပ်နိုင်ထားနိုင်မှာပါ။ (၁) အဖြူရောင် အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် ခရင်မ်ရောင် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ အခြေအနေပါ။ […]
မြန်မာပြည်ဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံကဆရာဝန် ပြောတဲ့ ကိုယ်ခံအား တက်စေတဲ့ အစားအစာများ
မြန်မာပြည်ဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံကဆရာဝန် ပြောတဲ့ ကိုယ်ခံအား တက်စေတဲ့ အစားအစာများ ဒီ vitamin 3မျိုးကို မှီဝဲသ၍ ဝူဟန်ကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတိုင်း စားနိုင်သော vitamin တွေပါ ကိုယ်ခံအားတက်စေသော vitamin C 1 မာလကာသီး2ကီဝီသီ3းလိမော်သီး […]
ဗိုက်ခေါက်ထူ အ၀လွန်ခြင်းအတွက် တစ်ပတ် ၂ကြိမ်ပဲ လုပ်သောက်…
အဆီတွေ တဝုန်းဝုန်းကျတာ ဗျာ သောက်ကြည့်ချင် နည်းပေးမယ် သခွားသီး တစ်ဝက် ၊ပူစီနံ ၁ စည်း ၊ ဂျင်း လက်တစ်ဆစ် ၊ သံပုရိုသီး ၁ လုံး ၊ ရေခရားထဲ အပြည့်ထည့် ညအိပ်ချိန် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထား (ရေခဲသေတ္တာက မအေးရင်တော့ […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှားရှားပါးပါး ဝမ်းသာစရာ သတင်းတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်။ …..
April 2, 2020 Khitalin Media 0
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှားရှားပါးပါး ဝမ်းသာစရာ သတင်းတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တာ တရုတ်အပြင် ကိုရီယားလည်း ပါဝင်လာပါပြီ။ ကိုရီးယားဟာ အရင်ရက်တွေက ကမ္ဘာမှာ ကူးစက်မှု ဒုတိယ တတိယနေရာလိုက်နေရာကနေ ဒီနေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းအရ အဆင် ၁၁ ထိ […]
ကိုရိုနာရောဂါ လို ဘက် တီရီး ယား နဲ့ ဗိုင်းရ ပ်စ်တွေ ကို တိုက်ခိုက်နို င်စွမ်း ရှိ တဲ့ ကိုယ် ခံအား ကောင်းေ စသော အစားစာ (၁၁) မျိုး
အခုတလောတရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကူးစက်ပြင်းထန်သော ကိုရိုနာရောဂါလို ဘက် တီရီးယား နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း ရှိ တဲ့ ကိုယ် ခံအား ကောင်းေ စသော အစားစာ (၁၁) မျိုး အကြောင်းကို စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး ကာကွယ်စားသုံးနိုင်ရန်ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။အားလုံးပဲ ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ […]
ဆေးစားဆေးသောက် မသက်သာတဲ့ ခါးနာတတ်သူများ အတွက် ဆေးနည်းပေါင်းချုပ်
March 15, 2020 Khitalin Media 0
ခါးနာအတွက် ဆေးနည်းတိုများ။ သက်ရင်းကြီးရွက်များကို ခါးတွင်ကပ်ပြီး အဝတ်ဖြင့်စည်းထားပါ။ (၂)နာရီကြာလျှင်၊ယာလာလျှင်ဖြည်ပေးပါ သက်ရင်းကြီးရွက်(၇)ရွက်ကို အိပ်ယာအောက်တွင်ခင်းအိပ်လျှင် ခါးနာသက်သာသည်ဟုရှေးလူကြီးများသုံးကြသည်။ ကိုရန်ကြီး(ခတ္တာပင်) အရွက်ကိုပျော့အောင်မီးကင်ပါ။ မုံညှင်းဆီ(သို့)နှမ်းဆီသုပ်ပြီး ခါးတွင်ကပ်ပြီးအဝတ်ဖြင့်ပတ်စည်းထားပါ။ ဗာဒံရွက်(ဗန်ဒါရွက်) အစိမ်းရောင်အရွက်နုကိုခါးတွင်၃ရွက်ခန့်ကပ်ပြီး ခါးနာလျှင်ပတ်သည့်ခါးပတ်ဖြင့်ပတ်ထားလျှင် ခါးကြောညပ်၊ခါးဆစ်နာသက်သာစေသည်။ သင်္ဘောရွက်ကိုပျော့အောင်ရေနွေးစိမ် ခါးတွင်ကပ်ပြီးပတ်ထားလျှင် သက်သာစေသည်။ ချင်းခြောက်မှုန့်၂ဆ+လင်းနေမှုန့်၁ဆ+သစ်ကြံပိုးခေါက်မှုန့်၁ဆ ရောစပ် ရေနွေးဖြင့်ကျေညက်အောင်ခေါက်ဖျော်ပြီး ဂွမ်း(သို့)ပတ်တီးစပေါ်တွင် သုပ်လိမ်း […]
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၆ မျိုး….
March 14, 2020 Khitalin Media 0
တစ်ခါတစ်လေ အစာမကြေ၊ရင်ပြည့်နေတာမျိုးကြောင့် ဗိုက်အောင့်တာမျိုးကဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဒီလို ဗိုက်အောင့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ လုံးဝမပေါ့ဆဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်နော်… ၁. ရေရှည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း တစ်ခါတစ်လေဗိုက်အောင့်တာမျိုးထက်ပိုပြီး သုံးလထက်ပိုကြာအောင် မကြာခဏအောင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသင့်နေပါပြီ… ဗိုက်အောင့်တာအပြင် ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာစတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိမရှိကိုပါ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ် ၂. မူးဝေအော့အန်ပြီးဗိုက်အောင့်တာ ဗိုက်အောင့်တဲ့အခါ တစ်ဆက်တည်း မူးဝေတာ၊ […]
မသိသူ​​ကျော်​သွား သိသူ​ဖော်​စားဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်​ပါဘူး​
March 9, 2020 Khitalin Media 0
မသိသူ​​ကျော်​သွား သိသူ​ဖော်​စားဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်​ပါဘူး​ ဒီ​နေ့မိသားစုတို့ကို ​ပြောပြချင်​တဲ့​ဆေးနည်းက ဗန်​ဒါရွက်​ အစွမ်းထက်​ပုံအ​ကြောင်းပါ ဗန်​ဒါ(ဗာဒံ)ရွက်​ ဗာဒံသီး ဟာ ​မြေပြန့်​​ဒေသ ပူအိုက်​တဲ့ရာသီဥတုအတွက်​​တော့ မြန်မြန်နဲ့ လွယ်လွ​​ယ်​​အရိပ်​ရလို့တချိူ့ ကမိမိအိမ်​ခြံဝင်းမှာအရိပ်​ရ​အောင်​စိုက်​ကြတယ်​​။နေရာတိုင်းမှာလည်း အ​လေ့ကျ ​​​​ပေါက်​ပါတယ်​။ သို့​သော်​ ဗန်​ဒါပင်​ရဲ့အစွမ်းကို​တော့သိသူနည်းပါးပါတယ်​။ ဗန်​ဒါ ရွက်​(ယခုပုံ)မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဗန်​ဒါရွက်​အရင့့်​ကို ​၃ခွက်​၁ခွက်​တင်​ကျိူ […]
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ
March 7, 2020 Khitalin Media 0
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ ကင်ဆာ ပျောက်စေသော ကြက်ဥပြုပ်လက်တွေ့ သားအိမ်ကင်ဆာဖြင့်ရန်ကုန်ဆေရုံကြီးမှာ စစ်ဆေးပြီးနောက်ကျမှလာသည်ဟုသတ်မှတ်ပြောဆိုခြင်းခံရသူအသက်၅၀ကျော် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး- လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသွားသည်ဆိုသဖြင့် တိုက်ကြီးမြို့အဝင် တာဂွရွာမှသတင်းပျံ့ပြီးတစ်ဆင့်စကားကြားသိရသဖြင့် ကံတိုက်ဆိုင်သူများပျောက်ကင်းကြစေရန်တင်ပြပါသည်။( ပေးပို့သူ။ ဆရာကြီးဦးသောင်းဌေး။ တာဂွရွာ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး) ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသူ။ သင်္ဘောသီး။သင်္ဘောရွက်ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲပါ။ဆေးမီးတိုဆိုပြီးအထင်မသေးပါနှင့်။ အစာဟောင်းအိမ် အူမကြီးမှာကင်ဆာအလုံးတွေ့၍ဖြတ်ထုတ်ရမည့်သူစ်ဦး။ငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ဆရာကြီးတစ်ဦးနည်းပေးသဖြင့်သင်္ဘောရွက်ပြုတ်အရည်သောက်ခြင်း။ အရွက်နုကိုတို့စရာလုပ်စားခြင်းဖြင့်မခွဲရပဲ၊ […]
March 6, 2020 Khitalin Media 0
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ​ ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ် … ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့​ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ […]
ငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်ဆိုးပြီး ယောက်ျားဆန်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြတဲ့ Mary
အမေနှင့်အဖေ အသက်(၄၅)ကျော်လာပြီဆိုရင် ဒါတွေ ဂရုစိုက်ပေးပါ…
ကိုဗစ်ကို တွန်းလှန်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အသက်ရှုအားကူစက်တွေကို ဖန်တီးနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားများ
နိမိတ်ကောင်းလို့ သတ်မှတ်ရမဲ့ ပန်းရောင်လမင်း လာမည့်ဧပြီလ(၇)ရက်မှာ ထွန်းလင်းမည် …../
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယ (၁၃၈၂ )ခုနှစ်မှာ ကံအကောင်းဆုံး တနင်္ဂနွေသားသမီးများ